ပြည်သူတွေ အရမ်းလိုချင်ပြီး မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို မွေးနေ့ ၊မွေးလ ၊မွေးရက်ထပ်တဲ့ အသက်(၂၂)ပြည့်မွေးနေ့မှာ တောင်းဆုပြုလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် နန်းစန္ဒာလှထွန်း – Ever Best
ပြည်သူတွေ အရမ်းလိုချင်ပြီး မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို မွေးနေ့ ၊မွေးလ ၊မွေးရက်ထပ်တဲ့ အသက်(၂၂)ပြည့်မွေးနေ့မှာ တောင်းဆုပြုလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် နန်းစန္ဒာလှထွန်း
By EverBest MPosted on June 22, 2021 March 15, 2022
သရုပ်ဆောင် နန်းစန္ဒာလှထွန်း က တော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် … . ။ အမှန်တရား ဘက်ကနေ သတ္တိ ရှိရှိနဲ့ ရပ်တည်လျက် ရှိနေတဲ့ သူမ က တော့ ပြည်သူတွေ စိတ်ခွန်အား ဖြစ်စေမယ့် စာလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ထက် တင်ပေးသလို တိုင်းပြည်မှာ လက်တလော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက် တွေကို မကြာခဏ မျှဝေပေးလေ့ ရှိသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ က တော့ လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူရဲ့ ခံစားချက်ကို လူမှုကွန်ယက်ထက် မှာ ပြန်လည် ပြောပြလေ့ရှိပါတယ် … . ။
ယနေ့လေး က တော့ အပြုံးချိုချို လေးနဲ့ အနေ အေးဆေးတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းစန္ဒာလှထွန်းရဲ့ အသက်(၂၂)ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ မွေးနေ့ မွေးလ၊ မွေးရက်ထပ်တူကျ တဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ပရိသတ် တွေက မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း တွေ တောင်းပေးနေ ကြ ပါတယ် … . ။ သူမ က တော့ အသက်(၂၂)ပြည့် မွေးနေ့ လေးမှာ ပြည်သူတွေ အရမ်း လိုချင်တောင်းတနေတဲ့ Democracyကိုအမြန်ဆုံး ရရှိစေဖို့ တောင်းဆုပြု လိုက်ပါတယ် … . ။
သူမ က တော့ ” ဒီနေ့ (၂၂)ရက် နေ့ မွေးနေ့ မွေးလ မွေးရက်ထပ်တဲ့ မွေးနေ့လေး မှာ အလိုချင်ဆုံး မွေးနေ့ လက်ဆောင် က တော့ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေ လိုချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်း တဲ့ Democracy ကိုအမြန်ဆုံး ရရှိပါစေ လို့ပဲတောင်းဆု ပြုချင်ပါတယ် ” ဆိုပြီး မွေးနေ့လေ းမှာ သူမလိုချင်တဲ့အရာလေးကို ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် … . ။ ယနေ့မှာ အသက်(၂၂) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ လေးကို ကျရောက်လ ာတဲ့ မင်းသမီးချောနန်းစန္ဒာလှထွန်းရဲ့ ချစ်စရာ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် … . ။
source : nan sandar hla htun ‘ s facebook acc
crd : MyanmarLoad
သ႐ုပ္ေဆာင္ နန္းစႏၵာလွထြန္း က ေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ရရွိထားတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ … . ။ အမွန္တရား ဘက္ကေန သတၱိ ရွိရွိနဲ႔ ရပ္တည္လ်က္ ရွိေနတဲ့ သူမ က ေတာ့ ျပည္သူေတြ စိတ္ခြန္အား ျဖစ္ေစမယ့္ စာေလးေတြကို လူမႈကြန္ယက္ထက္ တင္ေပးသလို တိုင္းျပည္မွာ လက္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ေတြကို မၾကာခဏ မၽွေဝေပးေလ့ ရွိသူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ က ေတာ့ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူရဲ့ ခံစားခ်က္ကို လူမႈကြန္ယက္ထက္ မွာ ျပန္လည္ ေျပာျပေလ့ရွိပါတယ္ … . ။
ယေန႔ေလး က ေတာ့ အျပဳံးခ်ိဳခ်ိဳ ေလးနဲ႔ အေန ေအးေဆးတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး နန္းစႏၵာလွထြန္းရဲ့ အသက္(၂၂)ျပည့္ေမြးေန႔ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေမြးေန႔ ေမြးလ၊ ေမြးရက္ထပ္တူက် တဲ့ နန္းစႏၵာလွထြန္း ရဲ့ ေမြးေန႔မွာ ပရိသတ္ ေတြက ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္း ေတြ ေတာင္းေပးေန ၾက ပါတယ္ … . ။ သူမ က ေတာ့ အသက္(၂၂)ျပည့္ ေမြးေန႔ ေလးမွာ ျပည္သူေတြ အရမ္း လိုခ်င္ေတာင္းတေနတဲ့ Democracyကိုအျမန္ဆုံး ရရွိေစဖို႔ ေတာင္းဆုျပဳ လိုက္ပါတယ္ … . ။
သူမ က ေတာ့ ” ဒီေန႔ (၂၂)ရက္ ေန႔ ေမြးေန႔ ေမြးလ ေမြးရက္ထပ္တဲ့ ေမြးေန႔ေလး မွာ အလိုခ်င္ဆုံး ေမြးေန႔ လက္ေဆာင္ က ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြ လိုခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း တဲ့ Democracy ကိုအျမန္ဆုံး ရရွိပါေစ လို႔ပဲေတာင္းဆု ျပဳခ်င္ပါတယ္ ” ဆိုၿပီး ေမြးေန႔ေလ းမွာ သူမလိုခ်င္တဲ့အရာေလးကို ေျပာျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ … . ။ ယေန႔မွာ အသက္(၂၂) ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ ေလးကို က်ေရာက္လ ာတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာနန္းစႏၵာလွထြန္းရဲ့ ခ်စ္စရာ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္ … . ။
Previous post သူမရဲ့ HDဆိုပြီး ဟန်ငြိမ်းဦးက ဆံပင်အရောင် တူတာလေး နဲ့ နာမည်ဖျက်နေတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ အိပန်ဆယ်လို
Next post စစ်ကိုင်းတိုင်း မြောင်မြို့နယ်က ပရဟိတ အဖွဲ့ဝင် (၃)ဦး ကို သတ်သွားတဲ့ တရားခံကို K Comedy Reporting ကထုတ်ဖော် ပြော